Replika tsara tarehy misy feo roa sy feo mahazatra, modely avo lenta mba haka an-keriny izao!
Vickers VC10 no britanika lavitr'andriana izay natsangana sy natsangan'ny Vickers-Armstrong (Aircraft) Ltd, ny sidina voalohany dia tany Brooklands tao Surrey tao amin'ny 1962. Ny fiaramanidina dia natao mba hampandeha lavitra ny halaviran-dalana lavitr'ireo haingam-pandeha ary koa afaka mahavita fanamby sarotra sy avo be avy any amin'ireo seranam-piaramanidina Afrikana. Ny foto-kevitr'ilay VC10 voalohany dia ny hanome fiaramanidina iray novokarin'ny mpikirakira iray izay mety hahafinaritra kokoa an'ireo lalam-be madiodio izay ampiasaina amin'izao fotoana izao. Ny fanatontosana ny VC10 dia nahatratra ny fiampitana haingana indrindra an'ny Atlantika (Londres sy New York), rakitsary izay mbola mitohy hatramin'izao ho an'ny fiaramanidina tsy misy dikany, fa ny Concorde supersonic dia haingana kokoa.
Ny VC10 dia matetika ampitahaina amin'ny Ilyushin Il-62 (USSR), ireo fiaramanidina roa no hany fanefana môtô tokana misy aoriana. Ny jona 2012, ny 8 VC10 dia mijanona ho serivisy amin'ny fiaramanidina fiaramanidina miaraka amin'ny Royal Air Force, ny fisotroan-dronono amin'ny volana marsa 2013
Noforonina 26 Oct 2006
Nohavaozina taminy 26 Aug 2012